Cameron.....: Ham and Cheese Scone....
Ham and Cheese Scone....
ကျွန်မ ဒီမုန့်ကို စားကြည့်ချင်နေတာကြာပြီ... ။ ကျွန်မတို့ အာရှဖက်က ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ လုပ်ရောင်းတာ သိပ်မတွေ့ရဘူး ..။ Starbucks မှာတော့ ရွှေဖရုံသီးနဲ့လုပ်တာရတယ်...။ Yangon Bake House မှာ တခါတလေတွေ့ရတယ်...။ Scone ဆိုတာက မူလ Scottish ကနေစလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေစားတဲ့ ဘီစကစ်မုန့်တစ်မျိုးပါ..။ ၁၆ရာစုအစောပိုင်းတုန်းကတော့ Dutch အလယ်ပိုင်းလူမျိုးတွေက Schoon(broot)လို့ခေါ်ပြီး fine bread လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဂျုံ ၊ ဘာလီ ၊ မုယော စတာတွေနဲ့ လုပ်လို့ရတဲ့မုန့်ဖြစ်တယ်...။ Scone မုန့်ကို မူလက သစ်သီးတွေနဲ့မံပြီးလုပ်တာများတယ်...။ အပေါ်ယံကမာကြွပ်ကြွပ်နဲ့ အတွင်းသားနူးညံ့တဲ့ မုန့်အချိုအရသာတစ်မျိုးပေါ့..။ ကျွန်မအခုလုပ်မယ့် Scone ကတော့ Pinterest ကနေ Recipe ယူထားတဲ့ အသားနဲ့ချိစ်နဲ့လုပ်မယ့် မုန့်ပါ..။ အချိုမဟုတ်ဘဲ အဆိမ့်ရသာပါ...။
1/4 Black Pepper, ground
1/2 cup Yogurt, Plain full fat
အပေါ်ကရေးပြထားတာ original recipe ပါ...။ ကျွန်မခုလုပ်မယ့်မုန့်ကိုတော့ baking soda မထည့်ထားပါဘူး...။ ပွအားကို ကြက်ဥနဲ့ Baking powder ကိုပဲ အားကိုး ထားပါတယ်...။ နို့အစား ရေထည့်လို့ရပါတယ်..။ ဒိန်ချဉ်လဲထည့်မထားပါဘူး...။ ပထမဆုံး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထဲက အမှုန့်တွေအားလုံးကိုချိန်တွယ်ပြီး ဇလုံတစ်လုံးထဲထည့်ထားပါ...။ ကြက်သွန်မိတ်ကို လက်တစ်ဆုပ်စာ နုတ်နုတ်လေးတွေလှီးထားပါ...။ Ham ကိုလည်း ထို့အတူပဲလှီးထားပါ..။ ဂျုံမှုန့်အရောထဲကို ထောပတ်ထည့်နယ်မယ် ထောပတ်နဲ့ဂျုံလုံးသွားရင် ချိစ်၊ ကြက်ဥ၊ ဟမ် နဲ့ ကြက်သွန်မိတ်ထည့်နယ်ပါ...။ ရေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့မုန့်သား အပျော့အမာပေါ်ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံးမှ ထည့်ပါတယ်..။ မုန့်လုပ်စားပွဲမရှိရင် စဉ်းနှီတုံးသစ်သားပြားကြီးပေါ်မှာ ဂျုံမုန့်ဖြူးပြီး မုန့်သားအလုံးကို တင်လိုက်ပါ..။ မုန့်သားပေါ်မှာဂျုံနည်းနည်းထပ်ဖြူးပြီး အ၀ိုင်းပုံ ပြားချလိုက်ပါ...။ တစ်လက်မအထူ ပန်းကန်ပြားဝိုင်းတစ်ပြားစာပြားချပြီးရင် ဓါးနဲ့ ရှစ်စိပ်စိပ်ပေးပါ..။ မုန့်ဖုတ်ဗန်းပေါ်မှာ parchment paper ဆီခံစက္ကူ ခင်းပြီး မုန့်တစ်စိပ်ချင်းကိုစီထည့်ပါ...။ ကြက်ဥအနှစ်ရည်သုတ်ပေးပါ...။ 200ံC ကြိုတင်အပူပေးထားတဲ့ Oven ထဲမှာ 25မိနစ်ဖုတ်ပေးပါ...။ ကြက်သွန်မိတ်နဲ့ ထောပတ်နံ့လေးမွှေးမြနေတဲ့ Scone မုန့်ကို မီးပိတ်ပြီး ချက်ချင်းမထုတ်ဘဲ စက်ထဲမှာ 10မိနစ်လောက်ထားပြီး အအေးခံပါ...။ အေးသွားရင်လေလုံဗူးထဲ ထည့်ပြီး လေးငါးရက်လောက် ထားသိုစားသုံးနိုင်ပါတယ်...။ မနက်စာ သို့မဟုတ် နေ့ခင်းစာ အဖြစ် ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် စတာတွေနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်...။
မုန့်သားကို ဒီလိုအစိပ်လိုက်မဟုတ်ဘဲ မိမိနှစ်သက်ရာ ပုံစံခွက်တွေနဲ့ဖြတ်တောက်နိုင်ပါတယ်
ဒီတစ်ပတ် စာမေးပွဲဖြေရမှာ..။ စာမေးပွဲမှာမေးမယ့် မုန့်လုပ်နည်းတွေကို ပြန်လှန်လေ့ကျင့်မလုပ်ဘဲ ချွန်ထွက်ပြီး ကိုယ်စားချင်တဲ့မုန့်တွေ လိုက်ကြည့်ပြီးလုပ်ဖြစ်နေတယ်...။ နောက်တစ်ခါ သကြားရည်ဆမ်းတဲ့ သစ်သီး Scone လုပ်ဖြစ်ရင် ပြန်ပြောပြပါဦးမယ်...။
ဒါက သစ်သီးနဲ့လုပ်တာကို နမူနာပြတာပါ
Posted by coral nyo at 22:23
You can check there they post about recipes step by step.
Very clear and I love to read it very much.
My Baking Class(3).....
My Baking Class (2).....